Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Deeq-bixiyaha - Cunnooyinka Lugaha
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah iyo Amniga
Ku haynta macluumaadkaaga mid aamin ah oo aamin ah ayaa aad muhiim noogu ah. Markaad wax ugu deeqdo Metro Meals on Wheels, waad hubi kartaa inuu macaamilkaagu aamin yahay, iyo in macluumaadkaaga aan lala wadaagi doonin dhinacyada kale.
Iyada oo qayb ka ah ballanqaadkeena ku aaddan hubinta in macluumaadkaagu aamin yahay, waxaan qaadnaa taxaddarrada soo socda:
Metro Meals on Wheels kama iibiyaan, ka ganacsadaan, ama kalama beddelaan macluumaadka hay'adaha kale.
Lacagtaada iyo macluumaadkaaga shaqsiyeed marwalba waa aamin. Nidaamkeena Badbaadada Lakabka (SSL) waa heerka warshadaha iyo midka ugufiican softiweerka maanta lagahelo macaamil ganacsi aamin ah. Waxay qarinaysaa dhammaan macluumaadkaaga shakhsiyeed, oo ay ku jiraan lambarka kaarka deynta, magaca, iyo cinwaanka, si aan looga aqrisan karin internetka.
Dhammaan macluumaadka ku-deeqaha deeq-bixiyeyaasha (jeegagga, waraaqaha ku-deeqaha, iyo wixii nuqullo ah) ayaa lagu hayaa kabadh lagu xereynayo oo xiran markii macluumaadka la hawlgeliyo.
Jeegaga meel fog ayaa la dhigaa oo la burburiyaa 30 maalmood gudahood.
Helitaanka macluumaadkaaga ayaa ku xaddidan shaqaalaha muhiimka ah iyo mutadawiciinta.
Shaqaale kasta iyo iskaa wax u qabso wuxuu leeyahay username u gaar ah keydka keyd-bixiyaha iyo lambarka sirta ee shaqadooda.
Deeqaha internetka waxaa lagu maareeyaa degel aamin ah oo toos loo dhigaa.
Foomamka deeqda waxaa la burburiyaa 3 sano ka dib waxaana lagu hayaa meel aamin ah ilaa waqtigaas.
Haddii aad ku deeqday qalad, waxaan ku faraxsanahay inaan saxno dhibaatada. Fadlan kala xiriir Metro Meals on Wheels adoo adeegsanaya iimayl ama (612) 623-3363 haddii aad u baahan tahay inaad wax ka beddesho deeqdaada.
Intaa waxaa dheer, waxaan ku faraxsanahay inaan ka jawaabno wixii su'aalo ama walaac ah ee aad ka qabtid arrimaha ku saabsan asturnaanta macluumaadkaaga. Waxaad kala xiriiri kartaa Metro Meals on Wheels adoo adeegsanaya iimayl ama (612) 623-3363.